Edebela ụdị ọhụrụ nke IPFS 0.8.0 ma mee ka ọ dị mfe ịrụ ọrụ na atụdo | Site na Linux
E wepụtalarị ụdị IPFS 0.8.0 ọhụrụ ahụ ma mee ka ọ dị mfe ịrụ ọrụ na ntụtụ
Bọchị ole na ole gara aga, mwepụta nke mbipute ọhụrụ nke usoro faịlụ ekwesighi IPFS 0.8.0 (InterPlanetary File System), nke bụ ụlọ ahịa faịlụ zuru ụwa ọnụ etinyere n'ụdị netwọk P2P nke sistemụ ndị otu mejupụtara.
IPFS agwakọta echiche ndị emejuputara na sistemụ dị ka Git, BitTorrent, Kademlia, SFS na Weebụ dị ka otu BitTorrent swarm (ndị ọgbọ na-ekere òkè na nkesa) na-agbanwe ihe Git. IPFS na-agwa ọdịnaya site na ọdịnaya karịa ọnọdụ na aha aka ike. Edere koodu ntinye akwụkwọ na Go ma nweta ikikere site na Apache 2.0 na MIT.
Maka ndị na-amachaghị IPFS, ha kwesịrị ịma nke ahụ na sistemụ faịlụ a njikọ njikọ faịlụ metụtara ọdịnaya ya ma gbakwunye hash nke crypto nke ọdịnaya. Adreesị faịlụ a enweghị ike ịnyegharị aha ya, enwere ike gbanwee ya naanị mgbe ị gbanwechara ọdịnaya. N'otu aka ahụ, ọ gaghị ekwe omume ịme mgbanwe na faịlụ ahụ na-enweghị ịgbanwe adreesị (ụdị ochie ahụ ga-anọgide n'otu adreesị ahụ na nke ọhụrụ ga-adị site na adreesị dị iche).
Na-eburu n'uche na njirimara faịlụ na-agbanwe na mgbanwe ọ bụla, ka ị ghara ịnyefe njikọ ọhụrụ oge ọ bụla, a na-enye ọrụ iji jikọta adreesị na-adịgide adịgide na-echebara ụdị nsụgharị dị iche iche nke faịlụ ahụ (IPNS) echiche, ma ọ bụ tinye aha aha site na iji ya na ọdịnala FS na DNS.
Mgbe nbudata faịlụ gị na usoro, onye so na ya na-akpaghị aka bụrụ otu n'ime isi maka nkesa. A na-eji tebụl hash ekesara (DHT) iji chọpụta ndị sonyere na ntanetị na ọnụ nke ọdịnaya nke mmasị dị.
IPFS na - enyere aka idozi nsogbu dịka ntụkwasị obi nchekwa (ọ bụrụ na enweghị nkwarụ nke izizi, enwere ike ibudata faịlụ ahụ na sistemụ ndị ọrụ ndị ọzọ), iji gbochie mmechi ọdịnaya yana yana ịhazi ikike na enweghị njikọ Internetntanetị ma ọ bụ ọ bụrụ na ogo nke ọwa nkwukọrịta adịghị mma.
1 Isi atụmatụ ọhụrụ nke IPFS 0.8
2 Etu esi eji IPFS na Linux?
Isi atụmatụ ọhụrụ nke IPFS 0.8
Na ụdị ọhụrụ a enwere ike ịmepụta ọrụ ndị dị na mpụga ịpinye data onye ọrụ (pin - kee data na ọnụ, iji hụ na echekwara data dị mkpa). Data e kenyere ọrụ nwere ike ịnwe aha dị iche iche, dị iche na njirimara ọdịnaya (CID), ya mere ọ ga-ekwe omume ịchọ data ma aha ma site na CID.
Iji hazie arịrịọ idozi data, IPFS na-atụdo ọrụ API ka achọrọ, nke enwere ike iji ya na go-ipfs. Na ahịrị iwu ka ịpị, a na-enye iwu "ipfs pin remote".
E degharịrị usoro pin pin n'ihi ya, ọ dị ọtụtụ ihe ngwa ngwa na ndị ọzọ mgbanwe n'ụzọ ọ tracks atụdo. Maka ndị ọrụ na-arụ ọrụ na ọtụtụ atụdo, nke a ga - eduga na mmụba nnukwu ọsọ na ndepụta na mgbanwe nke set nke anchored ọcha, nakwa dị ka a mbelata ebe nchekwa ojiji.
Emeziri akụkụ nke redesign iji chebara ikike ịmekọrịta na mkpọ ndị bi n'otu ụzọ ahụ anyị nwere ike isi eso ndị nwere ike ime (dịka aha, inwe ike ịtọ otu CID ọtụtụ oge, wdg). Nọrọ na-ege ntị maka ihe ndozi ndị ọzọ.
Mgbe ị na - ewepụta njikọ "https: //" maka ọnụ ụzọ ámá, a ga-agbakwunye ikike iji nyefee aha DNSLink site na iji subdomains.
Njikọ dị ugbu a, ebe a gbanwere oge na aha mbụ na "-" agwa na nke dị ugbu a "-" mkpụrụedemede agbapụrụ na njirimara ọzọ yiri ya, ma agbatịwo nkwado protocol QUIC Iji mụbaa arụmọrụ, ikike ịbawanye na-enweta nchekwa maka UDP nyere.
Finalmente ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere ya banyere nke a ọhụrụ version, ị nwere ike ịlele nkọwa na njikọ na-esonụ.
Etu esi eji IPFS na Linux?
Maka ndị nwere mmasị ịme ihe IPFS na sistemụ ha, ha nwere ike ịme ya site na isoro ntuziaka na zuru ezu n'isiokwu a.
IPFS: Etu esi eji sistemụ Interplanetary na GNU / Linux?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Na-atụ aro » E wepụtalarị ụdị IPFS 0.8.0 ọhụrụ ahụ ma mee ka ọ dị mfe ịrụ ọrụ na ntụtụ
PinePhone ga - enwe ndabara na Manjaro ya na KDE Plasma Mobile
Dapr, oge mmeghe nke na-eme ka okike nke ngwa ndi ozo n'ime igwe ojii